Music Khabar विदेशबाट पनि स्रष्टाको रोयल्टी उठाउने वातावरण बन्नुपर्छ - Music Khabar
Home » Exclusive » विदेशबाट पनि स्रष्टाको रोयल्टी उठाउने वातावरण बन्नुपर्छ
विदेशबाट पनि स्रष्टाको रोयल्टी उठाउने वातावरण बन्नुपर्छ
कन्हैया सिंह, गायक/सङ्गीतकार
कन्हैया सिंह लोकप्रिय गायक एवं संगीतकार हुनुहुन्छ । नेपाली गीतसंगीतको क्षेत्रलाई सदैव शीरमा राखेर अघि बढ्ने गायक सिंह पछिल्लो समय अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ । सपरिवार अमेरिका बसे पनि उहाँ नेपाली गीतसंगीतलाई भने कहिल्यै पनि टाढा राख्न चाहनुहुन्न । इनास अवार्ड र एनआरएनको चुनावका लागि भर्खरै मात्र नेपाल आइपुग्नुभएका गायक सिंह यूनाइटेड नेप्लिज आर्टिष्ट एसोसिएसन नर्थ अमेरिका (युनाना) र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) को मेरिल्याण्ड राज्यसममितिको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । विदेशमा रहेर पनि सबै कलाकारहरुलाई एकै छातामुनी राख्न सफल गायक सिंह आफ्नो नयाँ एल्बम आलाप–३ को तयारीमा समेत लाग्नुभएको छ । प्रस्तुत छ म्यूजिक खबरका लागि सुमन बैरागीले गायक सिंहसँग गरेको कुराकानीः
कस्तो चल्दैछ सांगीतिक जीवन ?
व्यापक व्यस्तताका साथ अघि बढिरहेको छ । पहिले देशभित्रै कार्यक्रमहरुमा व्यस्त भइन्थ्यो अहिले विदेशका कार्यक्रमहरुमा व्यस्त भइएको छ । त्यहाँ माथि पनि अमेरिकाजस्तो मुलुकमा विभिन्न नेपाली चाडपर्वको अवसरमा आयोजना गरिने सांगीतिक कार्यक्रमहरु अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनु नै पर्छ । महिनामा २–३ वटा कार्यक्रमहरुमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै आइएको छ ।
विदेशमा संगीतमै लागेर हिंड्न कत्तिको सजिलो छ ?
गीतसंगीतमा स्थापित भइसकेको व्यक्तिलाई देश र परिवेशले फरक पार्दैन । त्यहाँ आयोजना भएका विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा चाहेर पनि अलग रहन सकिँदैन । कार्यक्रममा सहभागिताको लागि व्यवसायिक रुपमा अफरहरु आइराखेकै हुन्छन् । प्राय कार्यक्रमहरु विदाको दिनमा आयोजना हुने भएकाले कामहरुलाई पनि मिलाएर, व्यवसाय छाडेर सांगीतिक कार्यक्रमहरुमा समय दिँदै आइएको छ । हुन त पूर्ण रुपमा कलाकारितामै समर्पण हुन सकिँदैन विदेशमा । स्वदेश होस् या विदेश चलेको कलाकारलाई त्यस्तो असहज हुँदैन । त्यसमा पनि विदाको दिन सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु भनेको त्यस्तो असहज हुँदैन ।
नयाँ सांगीतिक कोसेली केही आउँदैछ की ?
अब छिट्टै ल्याउने तयारीमा छु । आफ्नो नयाँ एल्बम आलाप–३ तयारीमा छु । एल्बमका धेरैजसो काम सकिएको छ । दुई वटा काम बाँकी रहेको हुनाले सम्भवतः एक हप्ताभित्र सकिएर यही महिनाभित्र सांगीतिक बजारमा ल्याउने तरखरमा छु ।
आलाप–३ भित्र कस्ता गीतहरु समावेश हुँदैछन् ?
आलाप भाग १ र २ भित्र सुगम संगीतमा आधारित गीतहरु नै छन् । ती गीतहरु जसरी स्रोताहरुले मन पराइदिनु भयो त्यही अनुसारकै गीतहरु अबको एल्बममा पनि रहनेछन् । १ र २ गीतहरु नयाँपनका साथमा केही पृथक दिने सोचमा छु ।
पछिल्लो समय गीतसंगीतमा प्रतिफल शून्यको अवस्था छ, लगानी मात्रै गर्न कसरी सम्भव हुन्छ ?
तपाईंको कुरामा सहमति जनाउँछु । अहिले बजार शून्यप्राय बनेको छ । अडियो भिडियो बिक्री गरेर कलाकार स्रष्टाहरुलाई प्रत्यक्ष आम्दानी हुने कुरा छैन । तर म एउटा गायक पनि भएको हुँदा कार्यक्रममा आयोजकहरुले बोलाउनु हुन्छ । पारिश्रमिक पाउँछु, मेरा गीतहरु पनि नेपाली दर्शक स्रोताहरुले किनिदिनुहुन्छ । त्यसरी हेर्दा आफ्नै एल्बम प्रस्तोताका हिसाबले आयआर्जन गर्न सहज भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा गीतकार संगीतकारहरुलाई अहिलेको बजारले मार पुगेको छ । रोयल्टी र यूट्यूबको आम्दानीले केही हदसम्म काम गरेको होला तर जति पाउनु पर्ने त्यो भने पाउन सकेका छैनन् । समग्रमा नेपाली कलाकारहरुले नेपाली संस्कृतिको लागि भने योगदान नै गरिरहेकै छन् । यसमा राज्यले पनि यस्ता स्रष्टाहरुलाई बेलैमा संरक्षण गर्नुपर्ने तिर ध्यान दिनुपर्छ ।
विदेशमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमले प्रस्तोतालाई त फाइदा पुगेको होला तर स्रष्टाले रोयल्टी त पाउन सकेका छैनन् नि ?
एकदमै यो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो । जसरी अहिले पछिल्लो समयमा नेपाली संगीत क्षेत्रमा रोयल्टीको काम चौतर्फी रुपमा बढिरहेको छ । त्यस प्रक्रियालाई देशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि लागू हुने काम गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । रोयल्टीका नीति नियमलाई विदेशमा हुने कार्यक्रमहरुका आयोजक, संघ संस्थाले पनि लागू गर्नुपर्छ । संगीत उद्योगको उत्थानको लागि विदेशमा हुने कार्यक्रमका आयोजकले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कुनै गीतसंगीत सार्वजनिक प्रयोग हुन्छ, आयोजकले त्यसको रेकर्ड राखेर स्रष्टाको रोयल्टी बुझाउने काम गर्नुपर्छ । विदेशको लागि पनि संगीत रोयल्टी संकलन समाजले उचित सिस्टम बनाएर अघि बढोस् । विदेशमा हुने कार्यक्रमका आयोजकलाई जानकारी गराइयोस् र सिस्टममा ल्याइयोस् । रोयल्टी विदेशबाट कलेक्सन गर्न जरुरी छ । नेपाली राजदूताबासमार्फत् सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुका आयोजकले नेपाली स्रष्टाहरुको बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने र रोयल्टी व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
अमेरिकामा कलाकारहरुको सञ्जाल कस्तो छ ?
आजभन्दा तीन चार वर्ष अगाडि कलाकारहरु व्यक्तिगत रुपमा लाग्थे भने पछिल्लो समय संस्थागत रुपमा पनि लागेका छन् । मेरै क्रियाशीलतामा धेरै कलाकारहरुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर यूनाइटेड नेप्लिज आर्टिस एसोसिएसन, नर्थ अमेरिका (यूनाना)को गठन भएको छ । त्यसले अमेरिकामा रहेका कलाकारहरुलाई एकै ठाउँमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । कति संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने कति व्यक्तिगत रुपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय संस्था चाहिन्छ भन्ने सोच सबैमा आएको छ । अमेरिकामा पनि चलचित्र, संगीत, वाद्यवादक, नाट्य क्षेत्रका लगायत थुपै्र गीतकार, संगीतकार, कलाकारको बाहुल्य छ । त्यसमा पनि नेपाली कलाकारको राजधानी नै बनिसकेको अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्य । पछिल्लो समयमा मेरै अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) मेरिल्याण्ड राज्यसमितिको गठन भएको छ । त्यसबाट पनि गीतसंगीतका गतिविधिहरु कला र संगीतका गतिविधिहरु हामीले संचालन गर्दै आइरहेका छौं ।
अमेरिकाको व्यस्त जीवनमा पनि संघसंस्थामा कसरी समय दिन सकिन्छ ?
वास्तवमा भन्नु पर्दा अमेरिकाको जीवन साह्रै व्यस्त नै हो । त्यहाँ व्यस्त भइएन भने जीवनयापन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यहाँको सिस्टममा पनि आउन सकिँदैन । हामी सामान्य व्यक्ति भएर बसेकोभए काम मात्र सोचिन्थ्यो । तर हामीले स्वदेशबाटै एउटा आफ्नो पहिचान बनाएर गएका कारण चाहेर पनि संघसंस्था र सामाजिक कार्यक्रमबाट अलग रहन सक्दैनौं । इच्छा भएपछि उपाय अवश्य नै हुन्छ ।
जसरी मलाई जसरी एउटा गायक संगीतकारको रुपमा देश विदेशमा मन पराइदिनु भएको छ । त्यसरी नै आगामी दिनमा पनि मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु । मेरा आउने कृतिहरुलाई पनि तपाईंहरुको माया प्रेम र सद्भाव खाँचो छ । मेरा व्यक्तिगत सांगीतिक विचार यस नेपालको एक मात्र पाक्षिक म्यूजिक खबर परिवारलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु । जय संगीत ।
‘आईआईएफटी’का डिजाइनरहरु भारततर्फ…
उत्पादक समाजमा उतपादकहरु हारेका छन जित्ने अनुहारहरु हेर्नुस् खेतालाले रोयल्टी ब्यबस्थापन कसरी गरलान???
साफ फुटबल भारतमा हुदैछ। यदि भारतले नाकाबन्दी खोल्दैन भने नेपालले साफगेम बहिष्कार गर्न सक्नुपर्थ्यो अनिमात्र बिषयले अन्तराष्ट्रीय ठाउ पाउथ्यो
बुद्धी छ भने जनजाती भन्ने ले कङ्रेस छोडे हुन्छ !! त्यो बाहुन महाजनहरु को पार्टी हो !! कुल बहादुर गुरुङ को जीवनभर को त्याग र समर्पण लाई कती गम्भिर प्रकार ले अपमान गर्‍यो !! थुक्क बाहुन, हार्ने चुनाव अस्ती को प्रधानमन्त्री उठे जसरी आँफै किन नउठेको ?? पुरानो काङ्रेस प्रेमले होला आज निन्द्रा परेन !!
साथीहरु नमस्ते !संसार बदल्नु छ सुरुवात आफैबाट गर्नु छ !! म एक आम नेपाली !! तेसपछी मात्रै कलाकार
हामी नेपालीको दसैं पो सकियो , दसा त उस्तै छ व्यथा उस्तै छ। ईन्धन आपूर्ति भन्दा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दौड़ प्यारो भएपछि यस्तै हो